News @ M-Media - Page 3947 of 3992 -
အိန္ဒိယ၏ နိုက်တင်ဂေးလ် ကဗျာဆရာမကြီး Sarojini Naidu၏ စိတ်နှလုံးကို ခိုက်စေသော ဒီမိုကရေစီ
“ ဒီမိုကရေစီကို ပထမဦးဆုံးသွန်သင် ကျင့်သုံးပြတဲ့ ဘာသာတရားပါပဲ။ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော် ဝတ်ပြုနှိုးဆော်စင်မြင့်ထက်ဆီကနေ နှိုးဆော်သံပြုလိုက်တာနဲ့ ဝတ်ပြုသူတွေအားလုံး ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်မှာ အတူတကွ စုရုံးတော့တာပါပဲ။ *ဘုရင်(တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစား)နဲ့ လယ်သမား ဘေးချင်းယှဉ်လျက် တတန်းတည်း ဒူးထောက်ကာ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်(သစ္စာဓမ္မတည်းဂုဏ်တော် ထွန်းတော်မူသော ပရမတ်[Read More…]
August 20, 2011 — ဆောင်းပါး
ကျွန်မတို. ချစ်ကြတဲ့ ကလေးလေးတွေ ကျန်းမာရေးအတွက် ကျွန်မတို. ဘာတွေ လုပ်ပေးနိုင်ပါသလဲ? ကလေးတွေကို မွေးစကနေ ၆ လ အထိ မိခင်နို. တစ်မျိုးတည်း တိုက်ပါ၊ရေတောင် မတိုက်ပါနှင့် လို. ပြောတော့ ကလေးအတွက်မလုံလောက်မှာ စိုးလို.ဆိုပြီး[Read More…]
August 19, 2011 — ကျန်းမာရေးနှင့်ဆေးပညာ
ရာမာဒန် နဲ့မဲဆောက်
အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ရာမာဒန်ဥပုဒ်လဖြစ်တဲ့အတွက် ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် မဲ ဆောက်မြို့က အစ္စလမ် လုပ်ငန်းရှင်တွေက ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကို ဒီနေ့ လှူဒါန်းနေပုံတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ) တဦး ထိုင်းဘတ် ၅၀၀ နှုန်း ရကြပါတယ်။ အသက်အရွယ်[Read More…]
August 19, 2011 — ဓါတ်ပုံသတင်း
Halal တံဆိပ်မြင်တိုင်းစားလို့ မရ
တလောက ရှမ်းတွေ နှစ်ပေါင်း ရာနဲ့ ချီကတည်းက အခြေချနေထိုင်တဲ့ မြို့ ငယ်တခုကိုရောက်သွားတော့ ထမင်းစားဖို့ ဆိုင်လိုက်ရှာရင်း ဟလာလ်တံဆိပ်ကြီးကြီးတပ်ထားတဲ့ဆိုင်တဆိုင်တွေ့ လို့ဝင်ထိုင်ဖြစ်တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်လောက်က တခေါက်ရောက်ဖူးထားလို့မွတ်စလင်မ်လူဦီးရေနဲနဲပဲရှိတယ်ဆိုတာ၊ မွတ်စလင်မ်ဆိုင်ရှားတယ်ဆိုတာ သိထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆိုင်ရှိလိုရှိညား လိုက်ရှာရင်း ဟလာလ်တံဆိပ်တွေ့ တော့ ၀င်စားဖြစ်တယ်။[Read More…]
August 16, 2011 — ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်
ကျားဘညိမ်း သို့ စာကြွေး (လူထုဒေါ်အမာ)
ဆရာမကြီး လူထုဒေါ်အမာရေးသော မြန်မာမွတ်စလင်မ် ကျားဘညိမ်းအကြောင်း မန္တလေးသူ မန္တသားများစာအုပ်မှဖြစ်ပါသည်။ ကျားဘညိမ်းဆုံးသွားတာ ခုဆိုရင်ခြောက်နှစ်ပြည့်ပါတော့မယ်။ သူဆုံးသွားတာအတန်ကြာပါမှ သူ့ကိုပိုသတိရဖို့ ဖြစ်နေရတယ်။ မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်မှာ (The big fights of the decades) ဆိုပြီး[Read More…]
August 15, 2011 — ထင်ပေါ်ကျော်ကြား ပုဂ္ဂိုလ်များ
Previous 1 … 3,945 3,946 3,947 3,948 3,949 … 3,990 Next